Ganaaxa waalidiinta iyo danbiyada dhallaankoodu galaan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ganaaxa waalidiinta iyo danbiyada dhallaankoodu galaan
La daabacay torsdag 11 februari 2010 kl 14.07
Laga bilaabo koowda bisha september waxaa waalidiinta khasab ku noqonaya in ay bixiyaan magdhawga khasaaraha ka dhasha danbiyada ay caruurtoodu geeystaan .dawladda ayaa maanta arrintaas go'aamineeysa.
Arrintaani waxay khuseeysaa marka dhallaanka da'doodu u dhaxeeyso 15 jir ilaa 18 jir ay galaan danbiyo ,waalidkood khasab kaga dhigaya in ay bixiyaan magdhaw haddey ahaan laheeyd alaab ama dad ay dhaawac u geeysteen iyo sidoo kale haddii ay aflagaado dad dhawac ugu geeystaan.
Soo jeedinta sharcigaan ayaa wax yar laga badaley si ganaaxaas looga dhaafo waalidiinta mas'uulka ka ah caruurta la korsadey oo aysan dhalin.
Laakiin hay'addihii muhimka ahaa oo laga codsadey in ay sharcigaan ka soo tala bixiyaan ayaa ku raacay hirgalintiisa.Qaar baase iyagu sharcigaan ka soo horjeeda sida hay'adda danbibaarayaasha ,ururka qareenada ,maxkamadaha degmooyinka Maalmo iyo Nacka,jaamacadda Stockholm iyo jaamacadda Uppsala iyo waliba sidoo kale ururka isbaheeysiga guri iyo iskuul.
Kuwaan iyagu sharcigaan dhaliilaya ayaa ku tilmaamey ,shuruudda ah ugu badnaan 8 500 karoon ay habsan doonto kooxo iyagu markoodii horaba liitey ,ugana dareeyso qoysas khilaafyo dagaal markoodii horaba ku dhexjirey.
Waxaa kaloo intaas sii dheer bey dheheen in soo jeedintaani aysan heeysan baaris taageereeysa in magdhaw laga qaado qofka mas'uulka ahi , hoos u dhimeeyso danbiyada dhallaanku galo,kaas oo ah ujeedada ugu weeyn oo sharcigaan laga leeyahay.
Sharcigaan oo kale wuxuu ka jiraa dalka Noorwey laakiin wax qiimeeyn ah oo lagu sameeyey lama soo bandhigin.
Laakin xataa wax ka sheegaas oo jira ,wasiiradda garsoorku Beatrice Ask weey ku faraxsan tahay:
Waxaan aaminsanahay in ay qaar badan u caddahay in
Yihiin waalidiintu kuwa mas'uulka ka ah caruurtooda.
Xataa waalidiinta ka yimid xaalado dhib iyo kadeed badan
Waa muhiim markii ay carrurtooda la hadlayaan oo ku dhahaan "hadda waa in aad si weeyn u taxadartaan"
Haddi aydnaan sidaas yeelinna xaaladdu wey nagu sii xumaaneeysaa ,taas oo caruurta u noqoneeysa dhanbaal Muhiim ah oo wax dareensiiya.